चक्करमा खुलेकी स्मृति ,फिल्म भित्रचाँही ऋचा र अर्पणको चल्छ कि चल्दैन ‘चक्कर’ ?
गायिकाबाट बिस्तारै कलाकारको रुपमा आफुलाई चिनाउन चाहेकी स्मृति पोख्रेल यो चलचित्रमा खुलेकी छिन् । त्यस्तै पछिल्लो समयमा गाईगुई गसिप बन्न थालेका अर्पण थापा र ऋचा शर्मा बिचको सम्बन्ध चलचित्र भित्र कस्तो छ ? त्यो हेर्नका लागी भने रिलिज अबधि सम्म कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।
चलचित्र ‘चक्कर’को अफिसियल ट्रेलर रिलीज भएको छ । अनुष्क रौनियारको निर्देशनमा बनेको फिल्मको निर्माण टिमले प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा अफिसियल ट्रेलर रिलिज गरेको हो । ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा लिड कलाकार द्वय एभोनराज उप्रेती र अर्पण थापाको द्वन्द्व देखिन्छ भने अभिनेत्री द्वय सृजना सुब्बा र स्मृति पोखरेलको इन्टिमेट दृश्य समेत जोडिएको छ । जसले फिल्मको कथामाथी केहि सस्पेन्स पनि छोड्छ । सेक्स भर्सेज क्राइम जनराको फिल्म हो ‘चक्कर’।
रविन आचार्यको निर्माण तथा छायांकनमा तयार फिल्ममा संगीत संगम पन्त र पुष्प पलाञ्चोकेको छ । फिल्मको सम्पादन पनि निर्देशक रौनियारले नै गरेका छन् ।
अभिनेत्री ऋचाले केहि फरक स्वाद पस्किने फिल्म बनेको र आफुले पहिलो पटक प्रहरीको भुमिका निभाएको भन्दै दर्शकलाइ मन पर्ने खुराक ‘चक्कर’ बनेको बताइन् । अर्पण र सृजना पनि फिल्मलाई लिएर आशावादी देखिए । फिल्मको सम्पादनको काम पनि निर्देशक स्वयंमले गरेका छन् । कथा, पटकथा र संवाद पनि अनुष्कको नै हो ।यो चलचित्र श्रावण ४ बाट फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ ।